The Gandhi Murder (2019) | MM Movie Store
၂၀၁၉ ခုနဈထှကျ Historical/ Political ဇာတျကာဒခဈြသူတှအေတှကျ A Must Watch ဇာတျကားတဈကားဖွဈပါတယျ….ကိုယျနှုတျနှလုံးသုံးပါးစလုံး ထပျတူကနြရေငျ ဒါဟာပြျောရှငျမှုပဲ အားနညျးတဲ့သူတှဟော ခှငျ့မလှတျနိုငျကွဘူး ခှငျ့လှတျခွငျးဆိုတာသနျမာတဲ့လူတှပေဲ ပိုငျဆိုငျတဲ့အရညျအခငျြးတဈခုဖွဈတယျလို့ မဟတ်တမဂနျဒီက မိနျ့ဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
အကွမျးမဖကျရေးလမျးစဉျသမား မတ်ေတာရှငျကွီး မဟတ်တမဟာ ၁၉၄၈ ခုနဈ ဇနျနဝါရီလ ၃၀ ရကျနေ့ နယူးဒလေီမှာ လုပျကွံသတျဖွတျခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒီဇာတျကားဟာ ဂန်ဒီရဲ့အမွငျကိုရိုကျကူးထားတာမဟုတျပဲ လကျတှဘေ့ဝမှာရှိခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိသုံးယောကျရဲ့အမွငျကို ဝိရောဓိဆနျဆနျ မှီငွမျးရိုကျကူးထားတာဖွဈကွောငျး သတိခပျြစခေငျြပါတယျ။
အခွတေညျထားတာက ဂန်ဒီလုပျကွံမခံရမီ အိန်ဒိနိုငျငံ ပူပူနှေးနှေး လှတျလပျရေးရပွီးကာစ ကာလမှာဖွဈပါတယျ…ပွညျတှငျးစဈဖွဈလာတော့မှာ ကြိနျးသသေလောကျဖွဈနပွေီး အမြိုးဘာသာဂိုဏျးကှဲ အစှနျးရောကျတှကွေောငျ့ နိုငျငံဟာခြောကျထဲကလြုကခြငျအခွအေနဖွေဈနပေါတယျ….
ပါကစ်စတနျက ငှကွေေးထောကျပံ့ဖို့ ကို ပယျခခြံရတဲ့ကိစ်စအတှကျ ဂန်ဒီဟာ အစာငတျခံဆန်ဒပွခဲ့တာကွောငျ့ ဟိန်ဒူပါတီဝငျတှကေမကမြေနပျဖွဈပွီး လုပျကွံဖို့ကွံစညျနကွေပါတယျ….အဲဒါကို ဘုံဘရေဲတပျဖှဲ့ဝငျ ဒီစီပီဂငျြမီနဲ့ ဒီအိုငျဂြီရနောတို့က ကွိုတငျသတငျးရထားခဲ့ပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုက ဘာဖွဈမလဲဆိုတာကို…
ဘာသာရေးမှိုငျးတိုကျလှမျးမိုးမှုတှေ ကငျးစငျတဲ့အိန်ဒိယနိုငျငံ ရုပျလုံးပျေါလာအောငျ ဘယျလိုစတေးမှုတှေ အနဈနာခံမှုတှလေုပျခဲ့ကွရသလဲဆိုတာကို ကိုယျတိုငျကွညျ့ရှုခံစားစခေငျြပါတယျ…
၂၀၁၉ ခုနစ်ထွက် Historical/ Political ဇာတ်ကာဒချစ်သူတွေအတွက် A Must Watch ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်….ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံး ထပ်တူကျနေရင် ဒါဟာပျော်ရွှင်မှုပဲ အားနည်းတဲ့သူတွေဟာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြဘူး ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာသန်မာတဲ့လူတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မဟတ္တမဂန်ဒီက မိန့်ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်သမား မေတ္တာရှင်ကြီး မဟတ္တမဟာ ၁၉၄၈ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ နယူးဒေလီမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဂန္ဒီရဲ့အမြင်ကိုရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိသုံးယောက်ရဲ့အမြင်ကို ဝိရောဓိဆန်ဆန် မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ကြောင်း သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
အခြေတည်ထားတာက ဂန္ဒီလုပ်ကြံမခံရမီ အိန္ဒိနိုင်ငံ ပူပူနွေးနွေး လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစ ကာလမှာဖြစ်ပါတယ်…ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာတော့မှာ ကျိန်းသေသလောက်ဖြစ်နေပြီး အမျိုးဘာသာဂိုဏ်းကွဲ အစွန်းရောက်တွေကြောင့် နိုင်ငံဟာချောက်ထဲကျလုကျခင်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်….
ပါကစ္စတန်က ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ ကို ပယ်ချခံရတဲ့ကိစ္စအတွက် ဂန္ဒီဟာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် ဟိန္ဒူပါတီဝင်တွေကမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး လုပ်ကြံဖို့ကြံစည်နေကြပါတယ်….အဲဒါကို ဘုံဘေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ဒီစီပီဂျင်မီနဲ့ ဒီအိုင်ဂျီရေနာတို့က ကြိုတင်သတင်းရထားခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို…
ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်လွှမ်းမိုးမှုတွေ ကင်းစင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုစတေးမှုတွေ အနစ်နာခံမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခံစားစေချင်ပါတယ်…